प्रधानमन्त्री देउवालाइ माग्नेको व्यंगात्मक प्रहार
आजभोलि माग्ने बुढा (केदार प्रसाद घिमिरे) सामाजिक संजालमा निकै व्यस्त छन्। पछिल्लो समयमा डिप्रेसन बिमारीको सिकार बनेका माग्ने बुढा, आजभोलि देशमा घटिरहेका विषयवस्तुलाइ लिएर व्यंगात्मक प्रहार गर्न निक्कै कप्पिस हुन थालेका छन्। नेपाल आइडलको प्रसंगलाइ लिएर पनि आफ्नो फेसबुकको स्ट्याटस भर्न मै व्यस्त थिए माग्ने। त्यस्तै अहिले भने प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मंत्रीमण्डल बनाउने प्रसङ्गलाइ बडो मनोरंजनका साथ व्यंग प्रहार गरेका छन्।
आउनुस पढ्नुहोस् माग्ने बुढाले लेख्नु भएको यी कुराहरु:
हजुरको हाल के छ ? यता सबै बेश बेस छ ।
फेरि मन्त्रीमंडल बिस्तार हुने कुराले मन हर्षित भएको छ । ५० त पहिल्यै थिए, अब थप्दा ६० जति हुने रहेछ, अति उत्तम हजुर। एक थरि मान्छे बिरोधमा उफ्रिन थालिसके, उफ्रिदैमा कोहि ठुलो हुँदैन, त्यसरी ठुलो हुने भए, जंगलको सबभन्दा ठुलो जनावर बाँदर हुन्थ्यो हजुर। ६० जना मन्त्री हुँदाका फाइदाहरु के के छन्? सकारात्मक कोणबाट केलाउन जान्न पर्यो नि होइन हजुर। उफ्रिनेहरु हो ! यहाँ पढ, के के छन् फाइदा।
हाम्रो देशमा मन्त्री बस्ने टोलमा बाटो पिच हुने र बत्ती नजाने प्रचलन छ, अब कम्तिमा ६० वटा टोल बिकसित हुने छ ।
अरु बेला जाम भए पनि मन्त्रीको सवारीको बेला ट्राफिक प्रहरीले बाटो खोलिदिने प्रचलन छ। अब ६० जना मन्त्री भएपछी सबै चोकमा कोहि न कोहि मन्त्री भेटिन्छन, यसले जाम खोल्न ठुलो सहयोग मिल्छ ।
६० जना मन्त्री भएपछी ६० वटा त महंगा गाडी चाहियो, ति गाडी बेच्नेले नाफा पाए, तिनको आर्थिक उन्नति भयो। बर्षेनी बिकासमा खर्च हुने कति रकम फ्रिज भैरहेको छ, त्यो रकम गाडी किनेर सदुपयोग भयो।
अहिले सम्म आफ्नो मान्छे मन्त्री नहुदा कतिलाई बिरक्त लागेको थियो होला, अब हेर्नोस, कसैका ज्वाई मन्त्री भए, कसैका भिनाजु मन्त्री भए, कसैका दिदि मन्त्री भए। परिवारमा कस्तो खुशी छायो, अब दशैंमा ससुराली जाँदा टक्क झण्डा सहितको गाडी घर अगाडी लगेर रोकेर टिका लगाउदा कस्तो मज्जा हुन्छ। पहिले नमस्कार गर्न नि गाह्रो मान्ने ससुराले मोजा सहितको खुट्टामा ढोग्दा कति रमाईलो हुन्छ।
बर्षौ देखि राजनीति गर्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई गतिलो ठेक्का पार्न नपाउदा कति पिडा थियो। अब बल्ल पिडामा मल्हम लगाउन पाइने भएको छ ।
भद्रकालीमा झण्डा बेच्ने पसल छ, ६० वटा झण्डा एकै चोटी बिक्दा, त्यसबाट आउने कर सरकारको ढुकुटीमा आउँछ र देशको आर्थिक उन्नति हुन्छ।
मन्त्री हुँदा दौरा सुरुवाल, कोट, टोपी, टल्किने जुत्ता लगायतको सामग्रीको पनि बिक्रि बढ्दा देशलाई आर्थिक टेवा पुग्छ।
हुलमुलमा मन्त्री बनाउदा टोले गुन्डाका आफन्त, डनका आफन्त पनि मन्त्री हुने सम्भाबना हुने हुँदा तिनले अब मन्त्रालय मै अखडा जमाउन पुग्दछन र टोलमा हुने दादागिरी कम भई शान्ति सुरक्षामा योगदान पुग्ने छ ।
मन्त्रीमंडल ठुलो बनाउंदा बिपक्षी दलको मनोबल कमजोर भइ कुर्सीमा बेला बेला जाने भुइचालो मत्थर हुन्छ ।
कुरो नबुझी उफ्रिनेलाई पुग्नेगरी भन्दिएं नि हजुर ।
माग्नेको यस्तो लेख आए पछि सामाजिक संजालमा यो लेखलाइ २९० जना भन्दा बढिले सेयर गरिसके। र अन्त्यमा जादा जादै माग्नेले आफु अभिनित चलचित्र छक्का पन्जा २ को पनि प्रचार गर्न भ्याएका छन्।
अन्त्यमा यसो भनेका छन् माग्नेले:
अन्तमा : अशोज ११ गते आरजु म्याडमलाई पनि लिएर हलमा आइसेला, संगै बसेर छक्का पन्जा हेरौंला हजुर ।
—–केदार प्रसाद घिमिरे (माग्ने बुडो )। मन परे शेयर गर्नुहोला ।
आरजु म्याडम त भन्नु भयो तर कसलाई भन्न खोज्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न अलि गाह्रो पर्यो। तपाइहरुलाइ थाहा छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला।